म कुनै गुटको होइन, ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को कार्यवाहक अध्यक्ष हु : गुरुङ
समिर गुरुङ, ठमेलका लागि चिरपरिचित नाम हो । रात्रीकालिन मनोरञ्जन व्यवसायी संघको अध्यक्षको सफल जिम्मेवारी बहन गरिरहुन भएको गुरुङ, ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को वरिष्ठ उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी बहन गर्दै आउनु भएको थियो । असोज २ गते परिषद्को २१औ र २२ औ साधारण सभा आयोजना गरिएपनि असोज १ गते बेलुकी साधारण सभा स्थगित गर्ने निर्णय कार्यसमितिले गरेको थियो । त्यसपश्चात दुई समुहमा विभाजित परिषद्का सदस्यहरु मध्ये एक समुहले २ गते साधारण सभा आयाजना गरि गुरुङलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको छ । त्यससँगै यतिबेला परिषद् विवादमा फसेकेको छ । परिषद्को तत्कालिन विवाद र समाधानका उपायका विषयमा गुरुङसँग गरिएको कुराकानी ?
ठमेल पर्यटन विकास परिषद्मा देखिएको पछिल्लो बिवाद के हो ?
तपाईले भन्न खोज्नु भएको विवाद के हो ? मैले बुझ्न सकिन परिषद्मा के विवाद छ र ?
उसो भए परिषद् अनिर्णयको बन्दि कसरी बन्यो त ?
पहिलो कुरो त हामीले असोज २ गत परिषद्को साधारण सभा आयोजना गर्यौ । जुन सधारण सभाबाट संस्थागत हित विपरित काम गरेकोले अध्यक्ष रामशरण थपलिया विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । जुन प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरि अध्यक्ष रामशरण थपलियालाई हटाइयो र मलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्यो ।
जुन साधारण सभाका लागि मिति र समय दुइ हप्ता अघि नै सार्वजनिक गरिएको थियो । सबैलाई पत्राचार गरिएको थियो तर उहाँले रातारात सामाजिक संजालमा सूचना हालेर साधारण सभा स्थगित गर्नु भएको रहेछ । त्यो त विद्यान त मिल्ने कुरा होइन ।
र अर्को हाम्रो खास विवाद त विधान संशोनबाट विवाद सुरु भएको हो । विद्यानत एउटा व्यक्ति दुइ पटक अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था छ । संशोधनमा तीन कार्याकाल बनाउने षड्यन्त्र भएको थियो । भएको यत्ती हो ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष समिर गुरुङले अध्यक्ष बन्न हतारो गर्दा परिषद् बिबादमा फस्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ नी ?
त्यस्तो होइन , रामशरण थपलियाजी आफैले आफने खुटामा आफै बन्चरो हान्दा यस्तो भएको हो । मलाइे धेरै घुमाएर कुरा गर्न आउदैन । ६ महिना कार्यकाल उहाँको बाँकी नै रहेछ त किन ६ महिना अघि नै साधारण सभा आयोजना गर्दै हिड्नुभयो ? कार्यकाल बाँकी छदै साधारण सभा किन राखेको त ? समय नसकिदै साधारण सभा गर्न हतारिने अनि विवादमा फसेपछि नानाथरी आरोप लगाउने ? यो गलत भ्रम हो मलाई पदीय लोभ छैन । थपलियाजीलाई नै सोध्नुस् म सधै उहाँलाई साथ दिएको मान्छे हु । म पदिय लोलुप्ता बोकेको मान्छे होइन सबैलाई थाहा छ ।
उसो भए तपाई गुटको कार्यवाहक अध्यक्ष ?
तपाइले भने जस्तो गुट सुट म बुझ्दिन । म ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को कार्यवाहक अध्यक्ष । मसँग साधारण सभाबाट दुइ तिहाइ बहुमतले गरेको निर्णयको फाइल छ । म जहाँ जान पनि सक्नु छु । मलाई भाषण गर्न आउदैन त्यसकारण जे भने पनि हुन्छ भन्ने भ्रम सबैले त्यगे हुन्छ ।
तपाईहरुको मुद्धा सिडियो कार्यालय सम्म पुगेको छ, तपाई विश्वास छ सिडियो कार्यालयले तपाईलाई कार्यावाहक अध्यक्षको मान्यता देला ?
मैले विश्वास राखेपनि, नराखे पनि केही हुदैन । एउटा संस्थाको साधारणले पास गरेको निर्णय कुरा राज्यको कुन निकायले मान्नुपर्छ । म संस्थागत विद्यान संवत छु । म नेतागिरी गर्न जान्दीन सिडियोमा पुग्नुपर्ने कुरा पनि थिएन । घर भित्रको कुरा लिएर सिडियो गुर्हान पर्ने आवश्यता थपलिया जिले कहाँबाट देख्नु भयो । साधारण सभाको निर्णय स्विकार्न नसक्नेले किन आयोजना गरेको त ? म नै आश्चर्यमा छु । ठुला ठुला भाषणा गरेकै भरमा व्यक्तिले संगठन चालउनु हुदैन र सक्दैन पनि ।
यसरी परिषद्लाई कहिले सम्म भद्रगोल बनाइ राख्ने ?
साधारण सभाले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि मलाइ कार्यालय छिर्न दिइएको छैन् । साधारण सभाको भोलीपल्ट म कार्यालय गए तर प्रहरीहरु कार्यालयमा माथिको आदेश भन्दै प्रहरीहरु आएर बसेका रहेछन । त्यसपछि हामीले बलजफस्ती गरेनौ । म साधारण सदस्यहरु लिएर पनि जान सक्थे त्यो मेरो अधिकार पनि थियो । तर उहाँहरुले जस्तो कर्मचारीलाई पनि धमक्याए र प्रलोभन देखाएर चाबि लिन खोज्ने मेरो स्वभाव छैन् । त्यसकारण मैले कार्यभार सम्हालेको छैन । पहिलो चरणको वार्ता भयो । उहाँले तपाईले छाड्नुस ६ महिना पछि म साधारण सभा गराउछु भन्नुभयो । व्यत्तिगत रुपमा भएको भए उहाँलाई सधै साथ दिएको मान्छे हो म यो कुरा पनि स्विकारथे होला तर दुइ तिहाइलाई मैले के भन्ने उहाँहरुले पनि मन्नु पर्यो मैले भनिदिए । त्यसपछि दोस्रो चरणको वार्ता भएको छैन् । अझै पनि उहाँ मिडियाबाजी गर्दै हिड्नु भएको छ । जसले गर्दा संस्थालाई मात्र होइन समग्र ठमेललाई घाटा भइरहेको छ । सम्भवत दोस्रो चरणको वार्ताबाट समस्या समाधान हुन्छ की ?